Company EMBA spol. s ro Paseky nad Jizerou - Tsiambaratelo mozika malalaka
orinasa EMBA spol. s ro. Paseky nad Jizerou dia eo amin'ny faritry ny faritra voaaro roa - Giant Mountainstoerana sy faritra voaaro Giant Mountains tao amin'ny lohasahan'ny Referana Jizera. Tsy mpizaha tany manan-danja ihany io faritra io, fa ivontoerana fanatanjahantena ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ririnina.
Ny niandohan'ny ny tantaran 'ny orinasa mifandray amin'ny taona 1882 izy noho ny nanaovana nanorina tara taratasy. Ny vokatra voalohany dia fotsy tanana baoritra. Fa ny vanim-potoana manaraka dia miavaka amin'ny fanitarana ny famokarana sy ny famokarana fandaharana faritra. Zava-dehibe ny dingana lehibe nitranga fampidirana ny famokarana Brown paperboard a Gross mavesatra baoritra. Ao amin'ny 1971 no napetraka voalohany biraom-milina mandeha ho azy samosnímací, in 1989 dia tahaka ny fanoloana ho an'ny boky efatra baoritra milina nihazakazaka birao milina faharoa.
Zásadním strategickým krokem společnosti byl fampandrosoana sy fametrahana ny famokarana angona fananganana, který komplexně zajišťuje arovana ny antontan-taratasy rehetra. Ao amin'ny vohikalam-pifandraisana tsara indrindra dia afaka manamboatra sambo birao a sekoly, ny maha-tokana azy dia omena amin'ny ankapobeny ampiasain'ny LUXOR.
EMBA Company Ltd. nandray in 1998 quality rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana ISO. Vondrona 2009 amin'ny famerenana ny rafitra ISO momba ny 9001: 2018, izay afaka mampita vaovao informatika amin'ny famoahana an-tariby sy ny fahaiza-manao. Kvalita iray avy amin'ny vondrona samihafa amin'ny fomba fanao mahazatra ny mpitsoa-ponenana sy ny zaridaina, ary indrindra indrindra Cover of the year a Worldstar. Ny vondrona 2003 dia nanolotra ny fitaovana ampiasaina amin'ny Ecologicky ny rafitra fanaraha-maso ny famerenana ny fonosana (na 225 g / m2) ho an'ny famandrihana amin'ny rafitra sy rafitra, mpamehy.
Fanamafisana ny hatsaran'ny vokatra sy ny fanompoana mifandray ho anareo ary koa ny ezaka mitohy mba ho dingana iray mialoha ny mpifaninana mamela antsika mba hiasa amim-pahombiazana dia tsy ao an-toerana ihany, fa koa amin'ny izao tontolo izao tsena. Efa maro mpanjifa afa-po no efa hita ao 15 firenena manerana izao tontolo izao. Ny fahaizana sy ny fahaiza-manaon'ny mpiasanay dia antoka ho an'ny fahamendrehan'ny mpanjifa sy ny kalitao amin'ny famokarana paperboard, tak při výrobě financních výrobků. Mifanaraka amin'ny ordinatera ISO 9001: 2008 Hanome feno isika rehetra, manome anao tsara mpanjifa. Te ho anareo izahay mba handray feno fanomanana sy ny fanamboarana ny fonosana.
Amim-pahatokiana, dia afaka mandroso ny asa anay, dia Ho manao ny vahaolana tsara indrindra noho ny fahafaham-po.
← Háje nad Jizerou avy amin'ny haavon'ny 11.04.2018
Sarintany ara-tantara goavambe →